Dowladii ugu horeysey oo Cambaareysa Weerarkii Lagu Qaaday Maqaayadaha Muqdisho
Afayeen u hadlay Dowladda Turkiga ayaa cambaareeyay weerarkii xalay lagu qaaday Maqaaadaha Pizza House iyo posh Treats oo ay ku dhinteen tirro ka badan 20 qof ku dhawaad 40 qof kale ay ku dhaawacmeyn.
“Anigoo ku hadlaayo magaca Dowladda Turiga waxaan aad u cambaareynayaa weerarkii xalay lagu ekeeyey maqayadaha muqdisho oo ay ku sugnaayeen dad aanan waxba galabsan oo goobahaasi iskaga mushaaxaayey, hadaan nahay dowladda turkigana waxaan diyaar u nahay in aan garab taagnaano dowladda soomaaliya iyo ehelada dadkii ku dhintay weerarkaasi dadka aan waxba galabsan lagu laayey oo aan la qeybsaneenaa murugada” ayuu yiri afayeenka u hadlay dowladda Turkiga.
“Waxaan hubnaa in shacabka Soomaaliyeed aynan u hakan doonin weerarkaas, oo ay hormarka halkooda kasii wadi doonaan”ayuu hadaliisa raaciyey Afayeenka u hadlay Dowladda Turkiga.
Xarakada alshabaab oo sheegtay masuuliyada weerarkaasina waxa ay sheegeen in weerarkasi ay ku dileen ajaniib halkaas ku sugnaa iyagoomaqaayadahasi ku tilmamey meelo lagu caweeyo oo ay iskugu yimaadaan waxa ay ku tilaameen munaafiqiin.
iyagoona ku nuux nuuxsaday in aynan marnaba joojin doonin beegsiga ay ku haayaan waxa ay ku tilmaameen goobaha lagu caweeyo.
Dowladda Turkiga ayaa kamid ah dowladdaha Soomaaliya kataageerada dhanka Amniga , iyagoo tababaro iyo qalab ciidan ugu deeqa ciidamada Xooga si ay kaga adkaadaan xarakada Alshabaab.